Librem 5 inowana mari yaida | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yakakurumbira smartphone ine Plasma Mobile ichave ichokwadi. Kana zvirinani izvo zvinoratidza iyo mhomho yekubhadharisa vanhu iyo yakagadzirirwa izvozvi chinangwa uye iyo yakazowana mari yakatsanangurwa. Librem 5, iyo smartphone nePlasma Mobile, yatove nemiriyoni nehafu yemadhora yainoda mukusimudzira nekutengesa.
Smartphone yekambani Kuchena kwakakwidza mari kwasara mavhiki maviri kuti apedze mushandirapamwe, chokwadi chekuti vazhinji (ini pachangu ndaisanganisira) vakafunga kuti hazvaizoitika.
Purism's smartphone haizove nePlasma Mobile chete uye ichaenderana nenzvimbo dzeGnome, asi ichave zvakare iyo yekutanga smartphone kuve inoenderana neIP tekinoroji. Zvakare, semamwe matunhu mazhinji, Librem 5 inogona kushandiswa sekomputa yedesktop, iwe unongofanirwa kubatanidza iyo yekutarisa uye nezvimwe zvese zvekushandisa kuti uwane inoshamwaridzika yeGnu / Linux nharaunda.
Librem 5 yawana mari yese inodikanwa asi ichiri kufanira kumirira maviri mamwe mavhiki kuti ive nayo
Zvekuchengetedza kuchengetedzeka ichave imwe yemasimba eiyi terminal. Uchishandisa zvinyorwa zvekunyorera, kutaurirana pakati peRibrem 5 nhare uye chimwe chigadzirwa chichavezwa, zvese pakutanga uye kumagumo, zvichiita kuti kuchengetedzwa kwekufona uye kutumira data kuve kwakachengeteka sezvinobvira. Pasina kukanganwa kuti ichave nePlasma Mobile senge inoshanda sisitimu, ndiko kuti, kuzadza kwakazara kweGnu / Linux uye nerutsigiro rweKDE Nharaunda.
Kuchine vhiki mbiri kuti mushandirapamwe wekubhadhara mari upere, vhiki mbiri kusvikira Purism yasimudza mari yekuvandudza iyi smartphone inoita kunge inovimbisa kuva yechitatu sarudzo mumusika we smartphone. Ndokunge, mushandisi wekupedzisira achafanomirira chero gore kuti Librem 5 ive muhomwe yavo, kumirira zvinotyisa kune vamwe asi kana ikaendesa izvo zvainovimbisa, ichave yakakosha. Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Librem 5 inowana mari yainoda
Kana ini ndikasaona yakanaka maratidziro, usadyara mari mairi, kana uinayo, ini ndinotenga chinotevera chinongedzo chechiratidzo, nekuti yangu sero ichiri kushanda uye inogara iri mhosho kutenga yekutanga terminal modhi. chero zvakadaro ini ndinoda danho, kunyangwe zvingave zvirinani kana riine kuenderana neApple maapplication, hapana mubvunzo kuti ndinozvitenga, zvishoma zvakataurwa nezve chirongwa chakadai ... zvakadaro ndanyadziswa kuti kana uchiisa iyo app haimhanye, ndinovimba Hazviitike senge Ubuntu foni kana, ndosaka ndisina chokwadi, nekuti panguva yacho yaivimbisa zvinhu zvikuru asi sezviri pachena yakafa nekubatana.
Ini ndinoisa tsanga yejecha, seimwe nzira, kune zvisirizvo zve android; uye kuti izvi zvinotsigirwa ne KDE zvakanaka, chishandiso chekutsigira Hardware chichava chakaomarara, zvichipiwa zvakasiyana siyana zvemadhizaini nekugadzirisa.
zano rebhizinesi ini ndichiri kutadza kuziva; Kana ivo vakananga kune kushambadza mune inouraya, kana kutengeswa kweinogumira nemuchina wako, kana rutsigiro mukugadzira, nekufamba kwenguva iwe uchaona nyaya yeecosystem kana kutama kwemaapps kwakakosha, nekuti kana vasingatsigire whatsapp, mutsara kana teregiramu, ivo vakafa vasati vaberekwa